Mayelana NATHI - Hebei Yifan Wood Industry Co., Ltd.
Imboni ye-Hebei Yifan Wood
Itholakala eQuyangqiao, eZhengding County, ehlanganisa indawo engamamitha-skwele ayizi-6,600. Ngaphambi kokuba siqale ibhizinisi lethu lamazwe omhlaba, impumelelo enkulu yenziwe emkhakheni wezohwebo eChina.
Ifektri inezinsizakusebenza zokukhiqiza ezisezingeni eliphansi, amasaha wokusika kagesi, ama-drill ezinhlangothi eziyisithupha azenzekelayo, imishini yokubopha onqenqemeni oluzenzakalelayo engeniswe isuka eJalimane neminye imishini emikhulu. Sihambisana nenqubomgomo kazwelonke yokuvikelwa kwemvelo futhi kunezinqubo zokukhucululwa kwendle. Ngo-Agasti 2019, indawo yefektri yanwetshwa, futhi imishini yapheleliswa futhi.
Umlando wefekthri ungalandelwa emuva ku-1985. Umsunguli walandela eduze ukukhuphuka kwentuthuko kazwelonke futhi wasungula ibhizinisi ngokuhlanganisa ukukhiqiza nokuthengisa. Sekuyibhizinisi lokukhiqiza elikhulu eChina.
Siqala ukukhulisa ithimba elingasolwandle ngo-2016, futhi manje linethimba lokukhiqiza nelokuthengisa elivuthiwe.
Izimpahla zethu zidayisa umhlaba wonke (i-USA, i-UK, iRiphabliki yaseCzech, iPoland, i-Israyeli ...) Ezitolo zethu ungabhekabheka ngezitayela ezahlukahlukene, kusuka kwesimanje kuye kwesasendulo nakho konke okuphakathi. Amanani kuzo zonke izitolo zethu angaphansi kwawodwa, ngakho-ke ungaqiniseka ukuthi uzothola izinto ezingaphansi.
Umsebenzi wethu ukwenza amaklayenti ethu azizwe njengama-superstars ayiwo. Kusukela emikhiqizweni esiyakhayo kuya kusevisi yethu yamakhasimende, siqinisekisa ukuthi konke esikukhiqizayo kusezingeni eliphakeme kakhulu nokuthi wonke umuntu uphathwa ngothando nokunakekelwa. Silwela ukubeka isibonelo sokuvumela ubuhle bakho bukhanye futhi bukhanye kusuka ngaphakathi.
Siyazi ukuthi kwesinye isikhathi asinakho okufunayo ekubonisweni, kepha uma usinika ithuba lokukubonisa izinhlu ezahlukahlukene ezivela kubahlinzeki bethu singakwazi ukuyithola ifenisha ephelele oyifunayo. Sicela ukholwe ukuthi singakunika umuzwa omuhle kakhulu wokuthenga.